LAHATSARY: Fitantarana Avy Ao Amin’ny Foibe Ara-Tantaran’ Porto Naranty Tao Amin’ny “Museu do Resgate” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2014 15:59 GMT
“Ny fanavotana no tena tiana resahana! Fijoroana vavolombelona momba ny fanavotana ny tantara taloha, ireo olona manana toerana lehibe indrindra teo amin'ny fiainanao, ny fotoana manokana sy ny fotoam-pianakaviana ary ireo zava-nitranga teny an-dalana. Ny zava-drehetra ambadiky ny vato sy rindrin'ny foibe ara-tantaran'i Porto. Ny lalao karatra sy daomy ao amin'ny zaridainan'ny tanàna, ankizy milalao baolina kitra ao amin'ny kianja, miresaka eo ambaravarakely, mitsoraka ao anaty renirano, ireo adihevitra momba ny politika eo amin'ny olon-dehibe sy ny fahavononan'izy ireo hanova izao tontolo izao”. Sary: lahatsary mozaika ao amin'ny habaka museudoresgate.org
Nanolo-kevitra handrakitra an-tantara ny lovan’ny kolontsaim-paritra ao amin’ny foibe ara-tantaran’i Porto amin’ny alalan’ny fampiasàna lahatsary ny Mozean’i Ransom. Nanjary “sehatra an-tserasera mikendry hamondrona ireo lahatsary nalaina tany an-trano, tany amin'ny toerana fahita andavanandro, sy tany amin'ny mpankafy lahatsary » maka sary ny andavanandron’ny faritra ao an-tanàna Portiogey sokajian’ny UNESCO ho vakoka iraisam-pirenena ny Mozea.
Nandritra ny resadresaka tamin’ny Global Voices, nanazava i Daniel Brandão, mpamorona ity famantarana nomerika ity, sady mpanao fikarohana haka ny maripahaizana dokotorà momba ny media nomerika ao amin’ny Oniveristen’i Porto ao anatin'ny fiaraha-miasa amin’ny Oniversiten’i Texas – Austin, fa azo atao ho « sehatra ampiasaina sady hanehoan-kevitra, hamoronana na hanaovan’ny olom-pirenena fitoriana ampahibemaso» ity « mozea fanoharana» ity.
Nahoana no ilaina “avotana” ireo tantara avy ao amin’ny foiben’i Porto?
Maro ny antony mahatonga ny tontolon’ny tantaran’ny foiben-tantaran’i Porto ho miafina tsy fantatra. Etsy andaniny, ny fahavitsian’ny mponina ao amin’ny paroasy lehibe indrindra, sy ny mponina efa nahazo taona ao amin’ny faritra dia nahatonga ny fiparitahan’ ity fiarahamonina ity izay nitarika ny fahaverezan’ireo fahatsiarovana marobe izay tsy mipaka any amin’ireo taranaka manaraka. Etsy ankilany, tsy mora hoan’ireo olona monina ao amin’ny foibe-tantaran’i Porto ny miditra any amin’ny tahirin-kevitra nomerika na tsy mampiasa na mizara lahatsary avy any an-trano. Fanampin’izany, fantatro tamin’ny alalan’ ity tetikasa ity fa tsy mahazatra anay ao Portiogaly ny mizara antserasera ireo fotoana nahafniaritra tao an-trano izay naraikitra an-dahatsary, izay mifanohitra amin’ny mitranga any amin’ny firenen-kafa.
Mba hanovàna izany fahazarana izany, manasa ireo mponina sy mpitsidika avy ao amin’io paroasy ny Mozean’ny Ransom mba hizara ireo zava-misy ao amin'ny faritr’izy ireo manokana. Nanomboka tamin’ny famoronana ny tetikasa tamin’ny volana jiona 2012, lahatsary maherin’ny 900 no efa “voavotra”, amin’ny endriny madio avokoa izy rehetra ka mbola mila hovaina, ” ary narindran’ireo olona isan-karazany manana fahaizana ara-teknika samihafa, matetika tsy misy fikasana hanome endrika sy bika na fitantarana niomanana mialoha ireo lahatsary”.
Tamin’ireo fantina lahatsary izay navondron’ny Mozea, nihevitra i Daniel fa sary mahaliana marobe no nipongatra, «na satria mitondra fahatsiarovana ho antsika izy, na mitondra tantara miaraka amin'izy ireo ho antsika, na maneho endrika sy bika, fijery na endri-panehoana samihafa. ” Nanamarika ny fahasamihafana eo amin’ireo fijery zarain’ny mponina ao amin’ny faritra sy ireo mpitsidika izay mijery ny lahatsary ihany koa izy:
Ny fironana dia ny fandraisana anjaran'ny mpitsidika amin'ny fomba tsy misy fandraisana anjara, mihataka lavidavitra amin’ireo olona eo am-pakàna sarimihetsika, raha toa kosa ka miara-mientana amin’ny hafa na mampiseho fiandraisana am-pitiavana amin’izay halain’izy ireo sary, amin’ny fanaovana teknikam-pitantarana ohatra ireo olona avy ao amin’ny paroasy.
(Mpaka sarin'ny Foibe) Iray amin'ireo lohahevitra marobe momba ny foiben-tantaran'i Porto izay nalaina sary – maka sary ny fandefasana lahatsariny ao amin'ny iray amin'ireo fihaonana “Lahatsary Juke Box” ilay mpanamory sambo Lobo do Mar (Ambodian-dRanomasina). Fihaonana nokarakarain'ny Mozean'i Ransom mba hampahafantatra ny tetikasa nandritra ny sakafo hariva tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray tao afovoan-tanànan'i Porto. Jereo ny lahatsary eto ambany.
Manangana Tantara Vaovao
Ankoatra ny fanangonana sy ny fampiratiana “lahatsary very tao anatin’ny fotoana sy ny toerana» ( izay niteraka “fitomboan’ny tahirinkevitra haino aman-jery midadasika, naparitaka sy tsy norafetina tao amin’ny sehatra aterineto tahaka ny YouTube”), ny tanjon’ny mozea ihany koa dia ny « hanolotra fomba fandikana sy sanda vaovao ireo lahatsary » raha vao vita ny fandrafetana azy indray ary mampiditra ao anatin'ny sombin-tsarimihetsika fomba fitantarana vaovao.
Izany no lohahevitra tamin’ny atrikasa izay notanterahina in-droa folakandro tamin’ny fiandohan’ny volana Novambra, ary nokarakarain’ny Mozean’ny Ransom tamin’ny alalan’ny “Future Places“ (Toeran'ny Hoavy)”, fetiben’ny media nomerika isan-taona natsangana tamin’ity taona ity indray ho toy ny “laboratoaran’ny media hoan’ny olom-pirenena” ao Porto .
Ny kendren'ny atrikasa dia ny «hanao izay hamokarana vakinteny, fitantarana mampiasa lahatsary toy ny akora fototra” avy amin’ireo tahirin-kevitry ny mozea, ka hanome dikany vaovao ny ssantsasany amin'ireo fanaka naranty tao amin’ny mozea:
Miezaka mahatakatra ny fomba hanomezan-danja ity fankafizana sy fahafahana mandray anjara amin’ity fanangonana tahirin-kevitra ity izahay, norafetina mba hahazoana hevitra mikasika izay mety ho banga hamenoana izany, miaraka amin’ny fanampian’ny olom-pirenena.
Manolo-kevitra amin'ny fampiasàna ny fitaovana fanitsiana an-tseraseran’ny Youtube ny atrikasa, ka efa vonona amin’ny alalan’ny fahazoan-dalana Creative Common ny lahatsary rehetra (ka azon’ny mpiserasera rehetra ao amin'ny sehatra ampiasaina indray), mba hahafahan’ireo mpandray anjara manangana sombim-pitantarana vaovao avy amin’ny lahatsary mbola tsy nisy fanamboarana.
Raisina ho ohatra ny sombin-dahatsary avy amin’ny tahirinkevitry ny Mozean’ny Ransom, izay mametraka ery ambony ny vondrom-behivavy milalao karatra an-kalamanjana ao an-tanàna manakaiky an’i Sé. Jereo ny fizarana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina , natsangana vetivety tamin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana fikirakirana ao amin'ny Youtube ity lahatsary eto ambany ity . Manasongadina ny fiten-jatovo mampiavaka ny olon’i Porto ny horonantsary, ka ahafahan’ny olona mandre ireo resadresaka ao an-damosina , sy ny fanavahana ny sombiny manome lanja ny hafainganam-pihetsiky ny tanan’ireo mpilalao: